Manahy Ny Taiwane Sao Ho Ataon’i Donald Trump Takalom-patsa Vidim-pihinana Fotsiny Amin’ny Fifampiraharahana Amin’i Shina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Desambra 2016 3:07 GMT
Sary avy amin'ny Standnews, tsy ampiasaina amin'ny resaka varotra.
Tamin'ny 2 Desambra, nobitsihin'ny Filoha amerikana voafidy Donald Trump fa niantso azy ny filohan'i Taiwan , Tsai Ing-Wen mba hiarahaba azy noho ny fandreseny tamin'ny fifidianana — tapaka am-polo taona ny fifanarahana tamin'ny Amerikana. Fotoana fohy tato aoriana, nisalasala izy tao amina tafatafa iray , “Tsy fantatro ny antony tsy maintsy hifamatorantsika amin'ny politika ” Shina tokana”, raha tsy hoe angaha mikasika zavatra hafa mihitsy no hanaovantsika fifanarahana amin'i Shina, isan'izany ny varotra.”
Mazava tsara ny fanazavan'ny Wikipedia, ny politikan'ny “Shina tokana” dia mifono hevitra hoe tsy misy afa-tsy iray ihany ny fanjakana atao hoe “Shina”, noho izany ireo firenena izay te-hanana fifandraisana ara-diplomatika amin'ny Repoblika Entim-bahoakan'i Shina dia tsy maintsy manapaka ny fifandraisana ôfisialy rehetra amin'ny Repoblikan'i Shina (Taiwan) ary tahaka izany ny mifamadika amin'izany.
Vetivety foana taorian'ny nandefasana ilay resadresak'i Trump tao amin'ny Fox News dia namoaka fanambaràna ny Formosan Association for Public Affairs na ny FAPA, Fikambanana tsy mitady tombony any Washington D.C, izay mikatsaka ny fananganana ny fanohanan'ny erantany ny fahaleovantenan'i Taiwan :
Amporisihina izahay ato amin'ny FAPA mba hijery ilay Filoha voafidy Trump miady amin'ilay ” Politikan'i Shina tokana” efa lany andro. Tsy mbola tao anatin'ny Repoblika entim-bahoakan'i Shina mihitsy i Taiwan.
Na izany aza, dia tsy tokony hatao takalom-patsa vidim-pihinanana ny zon'i Taiwan amin'ny safidiny sy ny demokrasia . Mifanohitra tanteraka amin'ny tarigetra izay iorenan'ny firenentsika ny fampiasana an'i Taiwan ho karazana “fifampiraharahana” amin'i Shina.
Ity fanambarana ity dia taratry ny fisalasalàn'ireo Taiwane maro raha toa ka ampiasain'i Trump ho fanoitra hifampiraharahana amin'i Shina fotsiny i Taiwan, na tena tiany tokoa hotombanana indray ny fifandraisan'i Etazonia sy Shina.
June Lin, mpiandraikitra ny resaka poitika ao amin'io Formosan Association for Public Affairs io ohatra, dia sorena amin’ny fampiarahan'i Trump ny “politikan'i Shina tokana” sy izay mety ho fifampiraharahana ara-barotra. Notononiny i Trump , ary avy eo naneho hevitra izy :
“Mazava amiko tsara ny ‘politikan'ny Shina tokana’, nefa tsy fantatro ny antony tsy maintsy hifamatorantsika amin'ny ‘politikan'ny Shina tokana’ raha tsy hoe manao fifanarahana mikasika zavatra hafa mihitsy amin'i Shina isika, isan'izany ny varotra.”
Niezaka ny ho malala-tsaina sy tsotra i Trump, saingy tena hentitra izy amin'ilay resaka fifanakalozana : ‘ Inona no ilàna izany [ politikan'ny Shina tokana izany ] ? — farafaharatsiny omeo ahy ny A sy ny B ary ny C, na tsy raharahako izany.’
Heveriko fa angamba ny teny hoe VAROTRA no amin'ny sora-baventy raha soratana ao amin'ny kaonty Twitter-ny ny teniny ???
Rehefa mivoatra ny jeopolitika any amin'ny ranomasina atsimo sy atsinanan'i Shina, dia Etazonia hatrany no toa mihetsika misantatra ilay lasitra vaovao amin'ny fampisehoana ny herin'ny miaramilany. Tamin'ny fitondràn'ny filoha Barack Obama, dia nanamafy ny fifamatorana ara-paikady tamin'i Taiwan ny governemantan'i Etazonia. Nankatoavin'ny Kongresin'i Etazonia ny lalàna momba ny fifandraisana amin'i Taiwan tamin'ny volana aprily tamin'ity taona ity, ary nohamafisin'ny “Six Assurances” (fiantohana enina), ny toeran'i Taiwan amin'ny maha-” mpiarémiasa manandanja” amin'i Etazonia azy.
Tamin'ny volana May, rehefa neken'ny House of Representatives-n'i Etazonia (Antenimieran'ireo Solontena vaventy) ny tetibola 2017 ho an'ny tafika, dia nisy ny fanitsian-dalàna izay nanome baiko ny sekreteran'ny fiarovan'i Etazonia mba hanaiky ny fitarihan'ny tafika Taiwane ny fanarahamaso ny fanazarantena an-dranomasina fantatra amin'ny hoe Rim of the Pacific Exercise (Manodidina ny Fanazarantena any Pasifika). Fanampin'izany, tamin'ny 8 Desambra, dia nolanian'ny antenimieran-doholona Amerikana ny volavolan-dalàna isan-taona mifehy ny politikan'ny fiarovana, ao anatin'izany ny sosokevotra ho an'i Etazonia mba hanao fifanakalozana ara-tafika avo lenta isan-taona miaraka amin'i Taiwan
Na dia hita hoe fihetsika sahy mba hanamafisana ny paikadin'ny fiarahamiasa aza ilay fisehoan'i Trump tao amin'ny Twitter, dia mbola manahy foana ireo Taiwane fa, ny ho mpanelanelana mendrika amin'ny fifanarahana ara-barotra amin'i Shina no ilàn'ilay mpandraharaha, Trump, an'i Taiwan. Marina fa firenena mahaleo tena i Taiwan, nefa tsy izany no fahitan'ireo manampahefana any amin'ny tanibe Shina azy — sady tsy ankasitrahany ireo hetsika hitany fa mankatò ny governemanta Taiwane.
Mampisalasala ny momba ny satan'i Taiwan ? Vakio ihany : Firenena ve i Taiwan, Nosy Mizaka tena, sa Faritra Nisintaka sa Faritanin'i Shina ?
Ankoatra izany, nahafantatra ny fahatongavan’ ilay olom-panjakana Amerikana taloha Henry Kissinger tany Beijing ny taiwane sasany tamin'ny fotoana nibitsihan'i Trump ilay fiantsoan'ny filoha Taiwane azy tamin'ny finday. Ho azy ireo, ny fihetsik'i Trump dia mampiseho ny filôzofian'i Kissinger momba ny fifandraisana amin'ny any ivelany, izay mifantoka indrindra amin'ny kisendrasendra. Saingy afaka hiaina amin'ny fifandraisana tahaka izany ve i Taiwan, izay nahita ny nidarohan'i Etazonia baomba an'i Kambodza, Laos, ary Vietnam tamin'ny faramparan'ny taona 1960 ka hatramin'ny 1970 ?
Nanahy ihany koa ny amin'ny fahalakian'i Trump amin'ny fifampiraharahana amin'i Shina i Jou Yi-Cheng, mpikatroka ara-tsosialy sady mpanao politika teo aloha :
Tokony hiandàlana ny fivoaran'ny politika vaovao Etazonia-Shina sy Etazonia-Taiwan. Tsy mbola nanomboka akory ny adihevitra eo amin'ireo mpanapa-kevitra amin'ny lafiny fifandraisana. Maika loatra Atoa Trump ka manery izao tontolo izao hiaraka aminy. Ny fiangalin'ny raharaham-barotr'i Trump dia ny fametrahana ny tanjona mazava tsara (i.e ny varotra) sy ny fametrahana ny takalom-patsa vidim-pihinana (ie Taiwan, ny politikan'ny Shina tokana) eo ambony latabatra mba hanohizana ny fifampiraharahana eo amin'ny roa tonta ( eo amin'i Etazonia sy i Shina fa tsy misy an'i Taiwan) haingana araka izay azo atao.[…]
Tsy maintsy misy resaka hevitra sy fahitana ny fifandraisana amin'ny any ivelany. Ny Tombontsoa no ivony, saingy tsy mandeha irery izany. Miasa miaraka ny foto-kevitra sy ny tombontsoa mivaingana. [ Raha tsy ny lahateny ara-poto-kevitra] dia ho lefy ny herin'i Etazonia, ary dia hanaraka ny olana.
Raha toa ka ezahan'i Trump hatao entam-barotra i Taiwan, i Shina kosa dia toa tsy liana ny hilalao izany. Ho an'ireo shinoa mpanao politika, Taiwan dia heverina ho ny iray amin'ireo tombontsoa fototr'i Shina, tsy asiana fifampiraharahàna. Raha ny marina dia aleon-dry zareo mifampiraharaha amin'ny Taiwane momba ilay fiarahamiasa vaovao amin'ny helodrano ety satria raha resaka Taiwan dia manan-javatra maro be atolotra ry zareo ( na andrahonana).
Ireo Taiwane sasany, na izany aza, dia mihevitra fa tranga mety ilay krizy na dia ho ampiasaina ho toy ny entam-barotra amin'ny fifampiraharahana eo amin'i Etazonia sy Shina aza i Taiwan. Izao no nolazain'i Yu-His-Liu, mpikaroka ara-toekarena :
Tsy tokony hatahotra ny ho ampiasain'ny hafa isika raha te-hiaina eto amin'izao tontolo izao. Raha tsy misy mampiasa ianareo, dia tokony hatahotra. Rehefa ny fifanarahana no resahana, ny tena zava-dehibe dia ny fahafantarana hoe samy mahazo tombontsoa amin'ilay fifanarahana ny roa tonta ary samy mahazo izay tadiaviny. Tsy tokony hionona ny Taiwane, nefa isika tsy tokony hanaiky faharesena ka handà an-jambany tsy hiditra amin'ilay lalao. Tsara kokoa ny mandray fanovàna amin'ny dingana ataontsika toy izay matahotra.[…] Tsy maintsy fantarintsika izay ilaintsika.[…] Ampahatsiahivina antsika fa tsy afaka milatsaka amin'ny fampisarahana izay manasokajy ny tsirairay ho tsara na ratsy sy mamela ny paikadin'ny “izy rehetra na tsy misy” hitarika ny hetsika ataontsika isika.
Mpisera iray antsoina hoe Azuel no nanadihady ny zavamisy ao amin'ny PTT, rafitra takelaka elektronika malaza any Taiwan, ary nanamafy ny an'i Liu ny fanehoankeviny :
Mila mailo tena mailo isaky ny dingana ataony i Taiwan satria mandeha eo ambony ranomandry mora vaky isika
I Taiwan no andry. Afaka manao tsindrin'entana izy, saingy hadisoana kely fotsiny dia mety hampihìlana ny mizàna.
Ilaina aorina amin'ny trangan-javatra vaovao izay iainantsika isan'andro ny kajikajy. Tsy misy fotoana tsy miova izany.
Fehiny, azo heverina ho karatra tsara ho an'ny ho avy azo vinaniana ity karatra ity, saingy mila mijery ny soritr'endriky ny mpilalao rehetra amim-pahamalinana isika rehefa akarina tsirairay ny karatra.
4 ora izayFilipina